Warshad Qoryaha Sandblaster - Shiinaha Soosaarayaasha Qoryaha, Alaab-qeybiyeyaal
HOLDWIN buluug Sandblaster Air Siphon Feed Bunch Gun Kit oo leh Talooyin Bixinta Ceramic
- 100% summad cusub oo tayo sare leh.
- Xiro iska caabin, nabaad-guurka, adkeysi leh.
- Bogsiinta dusha sare, xardho marmar.
- Qalab awood u leh ka saarida daamurka, miridhku, midab duug ah iyo waxyaabo kale oo badan.
- Halkii laga dhigi lahaa birta birta ah, birta birta ah ee qarxinta biiyaha, badbaadinta birta, yaree qiimaha.
- Naqshad ujeeddooyin badan leh oo loogu talagalay qarxinta iyo dareeraha cadaadiska sarreeya ama nadiifinta hawada ee qaybaha iyo dusha sare.
Sand Blaster Gun Kit Portable Pneumatic Gravity Sandblasting Gun Sandblaster Qalabka Qalabka Mashiinka, Ka saar miridhku dusha sare
QALABKA QALABKA XADGUDUBKA CARRUURTA PNEUMATIC QALABKA: fududahay in la isticmaalo, naqshadeynta mashiinka sandblasting ee la qaadan karo, masraxa sare wuxuu hayaa dhexdhexaad 510CC.
Hawlgal fudud: Ma aha oo kaliya fudud in la qaado laakiin sidoo kale waa fududahay in la shaqeeyo, buufinta waa dhakhso oo lebiska oo keydiya walxaha.
BADBAADADA: Qorigan buufin wuxuu leeyahay codsiyo badan oo kala duwan, ma ahan oo keliya sandblasting media laakiin sidoo kale daaweynta dusha sare iyo hagaajinta alaabta guriga.
TAAGEERA noocyo kala duwan oo ka mid ah MEDIA MIDAYNTA: sida soodhaha ama kuul muraayadaha, sodium bicarbonate, silica, walnut, garnet, waxaad isticmaali kartaa 46-100 mesh media mesh sandwich.
UJEEDO: Si gaar ah loogu isticmaalo dhammeystirka dhammaan noocyada geesaha dhimatay ee biraha fudud iyo birta yar yar, buufinta iyo nadiifinta, geesaha qallafsan iyo faahfaahinta miridhku iyo nadiifinta barkadaha dabaasha, ranjiyeynta rinjiga, barkadda qubayska, marmarka, daaweynta dusha sare ee baabuurka, wasakhda weelka, dhalada dhalada, iwm .
Gacanta-ku-haysashada Qalabka Qalalan ee Pneumatic-ga ah Qalabka Mashiinka Mashiinka la-qaadi karo ee Qalabka Is-goyska Madaxa Madaxa Sand Blaster
Codsiga: ciid (aluminium aluminium bunni ah, kuul quraarad iwm)
Xirmada Qoryaha Sandblast Gacanta Yar ee Qabsata Bambaano La Qaado Pneumatic
Qalabka Sandblast qoriga: Sand Blaster wuxuu ka kooban yahay waalka kontaroolada si buuxda loo hagaajin karo si aad si sax ah u dooran karto oo aad u xakameyn karto warbaahinta loo adeegsanayo.
Codsiga: Gaarka ah geeska birta yar yar iyo mid fudud, nadiifinta buufin, qallafsan, faaruqinta faahfaahinta ka saarista miridhku
Xasaasiga ugu weyn: iftiin, gacan-qabsi iyo hawl fudud.
Qaadid: Qoriga sandblast-ka waa tallaabo ka sarreysa sandblaster-kaaga yar laakiin weli aad u badan oo la qaadan karo oo saaxiibtinnimo ku habboon.
Feature: Si fudud uga gudub dhammaan mashaariicdaada qarxinta ciidda. Sandblasters shaqsi ahaan ayaa loogu talagalay waxqabadka iyo sahlanaanta isticmaalka.
1. Ku rakib labka 1/4 ”khidmadaha biibiile ee NPT ee aad dooratay saldhigga gacanka. Cajaladda Teflon ayaa dib loo cusbooneysiiyey si looga hortago daadinta hawada. Ha ku adkeynin, ama waxaa jira suurta galnimada in laga xayuubiyo birta, ama qoriga
2. Hubso in qadadka hawadu go'een.
3. Hubso in hawada la keenay ay nadiif tahay gaar ahaanna qalalan. Ciidda Blaster si wax ku ool ah ugama shaqeyn doonto hawo qoyan, UNIT SI QALDAN UMA SHAQEYN DOONTO 125PSI.
4. Fur waalka socodka ciid si aad u rabto. Dhig masarka dhoobada masaafo raaxo leh oo qayb ahaan ka mid ah si ay u qarxaan ciidda, ugu yaraan 6 illaa 24 inji ayaa lagu talinayaa.
1. Joogsiga Qulqulka Ciida
A. Hawada la keeno waxaa ku jiri kara qoyaan. Hubso in qalab biyaha lagu kala saaro oo sax ah la rakibay.
B. Hubi cadaadiska hawada (Ugu yaraan 60PSI ayaa loo baahan yahay)
C. Ku xaree cutubka hore ee kaydka, wiishka kor u qaad oo rogrog oo waxoogaa hubi orifice-ka qalabka wax lagu xakameeyo. Haddii lagaa hor istaago, qashinka ka bixi oo dib isugu soo ururi.
D. Hubso in biiyaha si buuxda loo adkeeyay (Gacanta Adkee oo keliya).
E. Ka saar sanka si aad u aragto haddii birta la geliyay ay luntay ama maqan tahay. HAND HELD SAND BLASTER MA SHAQAYN DOONO LA'AAN MAALMADII SHAQADA EE MEEL JOOGTAY.
2. Qaabka Ciida Qaloocan:
A. Hawada la keeno waxaa ku jiri kara qalad. Hubso in qalab biyaha lagu kala saaro oo sax ah la rakibay.
B. Warbaahinta sand sand waxay leedahay cabbir walxaha aan is waafaqsanayn waana in la miijiyaa. Isticmaal shaashad yar oo pattem leh ugu badnaan 1/16 ″ oo furan.
C. Sanka ayaa la xidhaa waana in la beddelo.
D. INLS INSERT WAY SHAQAYSAA AMA WAAYSAY.
Boron carbide biiyaha sanka lagu shubo ee qarxa abras
Cufnaanta: ≥2.48 / cm3
Awood jilicsan: ≥400MPa
Barta dhalaalida: 2450 ℃
Nolosha qalab kasta: Qoryaha biraha: 2000-2500h, ciid Quartz: 1000-1500h, Corundum: 500-1000h
Waxyaabaha: boron carbide
Cabirka: 35x20mm / 1.38 × 0.79inch
Dhexroor caajis: 3mm, 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 10mm 12mm
Qoriga Sandblaster Tayada Sare ee Nuugista Golaha Wasiiradda
-Waxay ku habboon tahay nooca sanduuqa mashiinka qarxinta gacanta iyo nooca sanduuqa mashiinka si toos ah u qarxa.
-Can waxaa loo isticmaali karaa muraayadda ciidda, ciida ciida, nadiifinta dusha sare, qaybaha farsamada.
-Fanka biiyaha ayaa dardar galiya hawada iyo xoqida maadama isku darku ka baxayo dhamaadka tuubada.
-Kabarka iyo dhererka marinka godka iyo galka ayaa go'aamiya qaabka iyo xawaaraha abrasinka ka baxa mashiinka.
-Ka koobnaanta maaddada dahaarka ayaa go'aamisa caabbinta gashaanta.
-Waxaa loogu talagalay nadiifinta dusha sare, hoos u dhigida iyo muraayadaha, aluminium aluminium iyo dusha sare ee qurxinta loogu talagalay xardho iyo xardho marmar
Qoryaha Karbaashka La Qaadan Karo ee 90psi Mashiinka-engeeg Yar ee Is-hagaajin Kara Diimaynta Setbbarka Buufin Set
Derusting Sandblasting Buufinta Qoriga
- Socodka la hagaajin karo: Qalabka qarxinta Pneumatic wuxuu si fudud u hagaajin karaa qulqulka qulqulka.
- Tayo sare: Caaga iyo aluminium jirka waa fududahay waana la qaadi karaa, si fudud ugu shaqee.
- Function: Waxaa loogu talagalay noocyada ugu badan ee iftiinka iyo geesaha birta yar yar, nadiifinta buufinta, geesaha ceeriin, faahfaahinta ka saarida miridhku iyo waxyaabo kale oo badan.
- Waxqabad wanaagsan: Bixi atomisyo siman iyo cabbir qeyb ahaan rinjiyeynta dusha.
- La qaadan karo: Jirka caaga ah, khafiif ah oo is haysta, si fudud ayaad u qaadan kartaa.
- Codsiga: Dheryaha weelalka ah ee awoodda badan leh waxay adeegsadaan noocyo kala duwan oo ah ciida birta madow ka sameysan iyo wax ka badan.
Nooca B Qoriga Nalalka ah ee Nalalka ah ee leh Boron carbide biiyaha G01
[Waxyaabaha]: Aluminium + boron carbide
[Cabbirka]: Boron carbide Biiyaha Dhexroorkiisa gudaha: 8mm
[Khuseeya]: sanduuqa mashiinka sandblasting ee gacanta ku jira iyo nooca sanduuqa mashiinka ciid-siinta
[Loo adeegso]: muraayadda ciidda, ciideynta, nadiifinta dusha sare ee qalabka, qaybaha mashiinnada
[Loogu Talogalay]: Nadiifinta dusha, ka saarista miridhku iyo galaaska, aluminium isku-darka ah iyo boodhka kale ee dusha sare lagu qurxiyo, xardho marmar
Gacanta ayaa ku haysata Qoriga loo yaqaan 'Pneumatic Plasatic Abrasive Bunch Gun SJ-G08'
Kahortaga miridhku kahortaga Hawada Sand Blaster Cufka Cunista Sandblasting Gun Portable Pneumatic Sandblasting Gun Qalabka Warshadaha
l Gacanku wuxuu ku sitaa Qoriga Neefta la qaadan karo ee Qoryaha Neefsashada Neefta leh
1.Si aad u isticmaasho caado, waxaad hagaajin kartaa qulqulka sandblastka oo waxaad beddeli kartaa qulqulaha.
Waxay ku qalabeysaa awood sare oo aad ugu habboon in la isticmaalo.
Dekedda laga soo galo hawada waxay ku qalabeysaa shaandhada shaandhada oo ka fogaan karta joogsiyada.
4.Waxaa jira wanaag badan oo jirkeeda aluminium ah oo dhan, sida miisaanka fudud, habka shaqada ee gacanta lagu qaato ee fudud, xawaaraha hawlgalka, si siman u ciideynta iyo wax badbaadinta.